Dil toogasho ah oo lagu xukumay Askar katirsan ciidanka dowladda – Somali Top News
Dil toogasho ah oo lagu xukumay Askar katirsan ciidanka dowladda
January 24, 2019 Somali Top News	0 Comments
Eedeysanayaal Dable Xoogga Xasan Maxamed Cabdulle iyo Dable Xoogga Maxamed Cadaan Cigale ayaa loo heystaa in ay dileen Marxuumiin Saciid Jaamac Cabdi iyo Nuur Maxamed Axmed oo si wada jir ah ugu safrayay waddada agfooye taarikhdu markey aheyd 25-ka bishaii 9-aad Sanadii 2018.
Eedeysanayaal Dable Xoogga Xasan Maxamed Cabdulle iyo Dable Xoogga Maxamed Cadaan Cigale ayaa dhigtay jid-gooyo ay kaga qaadaan baad shacabka ku safraya wadada dheer ee Afgooye, Marxuumiin Saciid Jaamac Cabdi iyo Nuur Maxamed Axmed ayaa ahaa wadaha gaariga iyo qof dhinac fadhiyay, waxaana wadaha gaariga lagu amray in uu bixiyo baad oo markii hore ku cusleyd balse Dable Xoogga Maxamed Cadaan Cigale uu amray in uusan dhaqaaqi Karin ilaa uu ka bixiyo lacagta laga rabo, waxa uu go’aansaday wadihii gaariga in uu isfurto laakiin Dable Xoogga Xasan Maxamed Cabdulle oo ahaa shaqsiga sida gaarka ah gaariga u hortaagnaa ee weydiiyay baadda ayaa sabab u noqday xabad uu riday in ay isku marto labada marxuum taasi oo ay ka dhalatay geeridooda.
Isla xilligaas ayaa laga soo qabtay goobta dilka ka dhacay kadib markii ay dadka shacabka ee ku dhaqan deeganadaasi ku war-geliyaaan ciidamada amniga in labada eedeysane ee dil geysteen, waxaana laba cisha kadib lagu wareejiyay hey’adda dambi baarista Boliiska CID.
Xilligaasi wixii ka dambeeyay ayaa lagu soo wareejiyay kiiska Xafiiska Xeer-Ilaalinta, waxaana 1-10-aad 2018 loo gudbiyay xabsia dhexe garsuga ahaan.
Muddo kadib baaristooda ayay xafiiska weydiisteen garsoorka 2-dii bishii 1-aad ee sanadkan ayaa loo ballamay dhageysia dacwadda waxaana maaalin kadib lagu ballamay dhageysiga dhinacyada Maxkamadda.
Fadhiga hore ayaa ku filnaan waayay dhageysiga dacwadda, waxaana markale la muddeeyay 8-deedii bishan 1-aad iyadoo 2 cisha kadib lagu ballamay fadhi kale.
Xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo bandhiga markaatiyaal wax laga weydiiyay dhibaatadii dhacday, waxa ayna sheegeen dadkii ka hor hadlay fadhiga maxamadda in laba eedeysane midkood uu amray in uusan dhaqaaqin gaariga inta ay bixinayaan baad ay ka doonayeen, markii arrintaas timid ayaa darawalka gaariga garowsaday in uu iska bixiyo waxa laga rabo si noloshiisa uu bad-baadiyo.
Nasiib xumo eedeysane Xasan Maxamed Cabdulle ayaa go’aansaday in uu nolosha u aqoonsado darawalka gaariga iyo qof rakaabka kamid ah oo dhiniciisa fadhiyay.
Dhamme Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa ku dooday in aysan qaban qof bixiyay baaddii laga rabay oo dambi kale aheyd in nolosha la dhaafiyo taasi oo muujineysa in Xasan Maxamed Cabdulle uu u bareeray daadinta dhiigga labada muwaadin.
Dable Xoogga Maxamed Cadaan Cigale ayaa isaga ahaa caawiye, Sidoo kale lahaa qoriga dhacca lagu geystay, waxaana dadka markaatiyaasha ah sheegeen in uu bixiyay amarka ah in gaariga uusan dhaqaaqi Karin ilaa uu ka bixinayo baadda laga rabay.
Qareenada u dooday laba eedeysane ayaa ku dooday in loo naxariisto loona fududeeyo ciqaabta labada eedeysane oo ay iska bixiyaan magta marxuumiinta.
Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ah guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ayaa u sheegay dhamman dhinacyada dacwadda in Dable Xoogga Xasan Maxamed Cabdulle uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxa ayna maxkmadda ku xukuntay dil toogasha ah oo ah qistaasta marxuumiinta Saciid Jaamac Cabdi iyo Nuur Maxamed Axmed halka Dable Xoogga Maxamed Cadaan Cigale lagu xukumay sideed sano oo xabsi ciidan ah.
Xukunsanayaasha ayaa heysta fursad kale oo ay ku dalban karaan rafcaan hadii aysan ku qancin xukunka maxkamadda darajada koowaad.
← Violet Kemunto Hiding in Somalia – Police
Golaha cusub ee wasiirada Hir-shabeelle oo la dhaariyay →
Cabdiwali Gaas hadii uu guuleysan waayo yuu xilka la rabaa?
December 30, 2018 Somali Top News 0
Ciidamada dowladda iyo Al shabaab oo ku dagaalamay gobalka Bakool
May 20, 2019 Somali Top News 0
Madaxweynaha Puntland oo ka cabsi qaba iney ku kacdo dhalinyarada, digniina soo saaray
July 16, 2019 Somali Top News 0